အရင် ထဲက ခြောက်ပြီး သားမို့ လာမ ခြောက်ကြ နဲ့ လို့ ဟစ်ကြွေး လိုက် တဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း)…. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အရင် ထဲက ခြောက်ပြီး သားမို့ လာမ ခြောက်ကြ နဲ့ လို့ ဟစ်ကြွေး လိုက် တဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း)….
အရင် ထဲက ခြောက်ပြီး သားမို့ လာမ ခြောက်ကြ နဲ့ လို့ ဟစ်ကြွေး လိုက် တဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း)….
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေမိတ်ကပ်နဲ့ အလှ ဖန်တီးရှင်တစ်ယောက် အနေ နဲ့ အနုပညာ လောက ထဲ ရောက် ရှိ လာခဲ့တဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း) ကိုတော့ အားလုံး သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။……… ယခုအချိန်မှာတော့ ညီညီမောင်ဟာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုသာ မက ကြော်ညာတွေကို ပါ ရိုက်ကူးလာပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို တစ်စတစ်စနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်းစီ လုပ်လာကာ အနုပညာ လမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…….
လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ညီညီမောင်က မိတ်ကပ် နဲ့ အလှ ဖန်တီးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားကာ လမ်းမထက်မှာ ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူ အမှန်တရား ဘက်ကနေ ရပ်တည်နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။………. တက်နိုင်တဲ့ ဘက်ကလည်း တက်အားသမျှ အလှူဒါနလေးတွေ လုပ်နေကာ ပရိသတ်တွေ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ဆန္ဒထုတ် ဖော်ထုတ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…… ယခုအခါမှာတော့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ကြွေးကြော်သံ တစ်ခုကို ကြွေးကြော်လာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ အားလုံး ကတော့ အကြောက်တရားတွေ ကြားကနေ ခုခံရင်း လွတ်လပ်ပြီး……… တရားမျှတတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ တော်လှန်နေကြတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ပေါင်းစုံက ခြောက်လှန့်နေမှုကို ဂရုမစိုက်ပဲ မိမိတို့ လိုလားတဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ရယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်း အားလုံးက အားတင်းပြီး ရှေ့ဆက် လျှောက်လှမ်းနေကြတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။……. သုသုဟာလည်း သူရဲ့ Facebook ထက်မှာ”ငါ တို့ကို လာမခြောက်နဲ့ငါ တို့က အရင်ထဲက ခြောက်ပီးသားဆိုပြီး အရင်ထဲက ခြောက်ပီးသားမို့ ခုလာမခြောက်ကြနဲ့လို့ ဟစ်ကြွေးလာတာ ကို ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရမိတ္ကပ္နဲ႔ အလွ ဖန္တီးရွင္တစ္ေယာက္ အေန နဲ႔ အႏုပညာ ေလာက ထဲ ေရာက္ ရွိ လာခဲ့တဲ့ ညီညီေမာင္ (စမ္းေခ်ာင္း) ကိုေတာ့ အားလုံး သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။……… ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ညီညီေမာင္ဟာ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးေတြကိုသာ မက ေၾကာ္ညာေတြကို ပါ ႐ိုက္ကူးလာၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို တစ္စတစ္စနဲ႔ ေျဖးေျဖးခ်င္းစီ လုပ္လာကာ အႏုပညာ လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။…….
လက္ရွိ အခ်ိန္မွာေတာ့ ညီညီေမာင္က မိတ္ကပ္ နဲ႔ အလွ ဖန္တီးတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ရပ္နားထားကာ လမ္းမထက္မွာ ျပည္သူလူထု နဲ႔ အတူ အမွန္တရား ဘက္ကေန ရပ္တည္ေနတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။………. တက္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကလည္း တက္အားသမွ် အလႉဒါနေလးေတြ လုပ္ေနကာ ပရိသတ္ေတြ ျပည္သူေတြ နဲ႔ အတူ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ထုတ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။…… ယခုအခါမွာေတာ့ သူရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ ေႂကြးေၾကာ္သံ တစ္ခုကို ေႂကြးေၾကာ္လာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအခ်ိန္မွာ အားလုံး ကေတာ့ အေၾကာက္တရားေတြ ၾကားကေန ခုခံရင္း လြတ္လပ္ၿပီး……… တရားမွ်တတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ေတာ္လွန္ေနၾကတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္ေပါင္းစုံက ေျခာက္လွန႔္ေနမႈကို ဂ႐ုမစိုက္ပဲ မိမိတို႔ လိုလားတဲ့ လြတ္လပ္မႈကို ရယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးက အားတင္းၿပီး ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။……. သုသုဟာလည္း သူရဲ႕ Facebook ထက္မွာ”ငါ တို႔ကို လာမေျခာက္နဲ႔ငါ တို႔က အရင္ထဲက ေျခာက္ပီးသားဆိုၿပီး အရင္ထဲက ေျခာက္ပီးသားမို႔ ခုလာမေျခာက္ၾကနဲ႔လို႔ ဟစ္ေႂကြးလာတာ ကို ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုက္တာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post မနေ့က ပါရမီ စိန်ဂေဟာ ရှေ့ ကွယ်လွန်သွား တဲ့ မောင်အောင်ပိုင်ဦး ည က ဝင်ပူး တဲ့ (ရုပ်/သံ)
Next post သူမ ရဲ့ ဖုန်းကိုကောက်ရတယ် ဆိုပြီး POST တင်ကာ ကောလ ဟာလ လွှင့်နေသူတွေ ကို ပညာသား ပါပါနဲ့ တုံ့ပြန်ပြောဆို လိုက်တဲ့ အေးသောင်း